Official Website of CA Member Rabindra Adhikari – वाइडबडी खरिदमा मेरो गल्ती भेटिए राजनीतिबाटै सन्यास लिन्छुः पर्यटन मन्त्री
२५ कात्तिक, काठमाडौं । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी अनुभवका हिसाबले नयाँ मन्त्री हुन् । मन्त्री बन्नुअघिसम्म उनी युवा पुस्ताका आश लाग्दा नेता मानिन्थे ।
मन्त्री बनिसकेपछि युवा नेता अधिकारीको छवि बजारमा खासै राम्रो छैन । उनले राम्रो काम गर्न नसकेको गुनासो बजारमा बढेको छ । चीनबाट ल्याइएका विमानहरु उडाउन नसकेकोदेखि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेकोसम्म आरोप खेपिरहेका मन्त्री अधिकारीचाहिँ अहिलेसम्म आफ्नो कामप्रति ढुक्क एवं बिन्दास देखिएका छन् ।
‘आश गरिएको केटो जेठाजु पर्यो ’ भन्ने नेपाली आहानजस्तै युवा नेता अधिकारीले मन्त्री बनेर किन आफ्नो छवि धुमिल बनाइरहेका होलान् ? यसको खास कारण पत्ता लगाउन अनलाइनखबरले मन्त्री अधिकारीसँग लामो अन्तरवार्ता गरेको छ ।
अन्तरवार्ताका क्रममा मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयबाट राम्रो काम गर्न खोज्दा आफूमाथि प्रहार भइरहेको दाबी गरे । यस्तो प्रहार मिडिया र आफ्ना समकालीनहरुले समेत गरिरहेको भन्दै उनले सरकारले गरेका राम्रा कामको बचाउ गर्न नेकपाका नेता कार्यकर्तासँग आग्रह गरे ।
अहिलेसम्म केके काम गर्नुभयो त ? अनलाइनखबरको प्रश्नमा मन्त्री अधिकारीले भने – ‘मैले साना मसिना काम भन्दिनँ ।’
चिनियाँ वाइडबढी विमान खरिद प्रकरणमा अघिल्लो सरकारका पालामा अनियमितता भएको हुन सक्ने भन्दै मन्त्री अधिकारीले छानविन हुनुपर्ने बताए । अनलाइनखबरसँगको विशेष कुराकानीमा उनले भने– ‘यसमा मेरो यदि अलिकति पनि संलग्नता कसैले छानविनका क्रममा भेटेछ भने दाबाका साथ भन्छु जिन्दगीभरि राजनीतिक सन्यास लिन्छु ।’
पर्यटन मन्त्रालयका कामका सन्दर्भमा मन्त्री अधिकारीसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीः
मैले यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि स्वभाविक रुपमा यो मन्त्रालय धेरै संवेदनशील र विभिन्न बेलामा विवादमा पनि आइरहने मन्त्रालय भएकाले त्यस्ता प्रवृत्तिले केही न केही गर्छन् भन्ने मलाई लागेकै हो । यसमा धेरैका स्वार्थ गाँसिने र स्वार्थ पूरा नहुनेहरुले अनेक खालका विवाद सिर्जना गर्ने, यो स्वाभाविक छ ।
वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा जिरो प्रतिशत पनि संलग्न छैन । यदि अलिकति पनि संलग्नता कसैले छानविनका क्रममा भेटेछ भने दाबाका साथ भन्छु जिन्दगीभरि राजनीतिक सन्यास लिन्छु । थोरैमात्र पनि कुनै डर छैन । किनकि जब बिराइँदैन भने डर हुन्न क्या
पोखरा विमानस्थलको काम अघि बढेको छ । टीआइएको स्तरोन्नतिको कामलाई गतिमा अघि बढायौं । २७ वर्षअघि गर्नुपर्ने काम भर्खरै हामीले ठेक्का लगायौं । यो वर्षाअगाडि काम सिध्याउँदैछौं । जब कामहरु फटाफट अघि बढ्न थाले, त्यसपछि ममाथि अनेक बाहानामा आक्रमण भयो ।
स्वार्थ समूहसँग सम्झौता गर्नेभन्दा कामबाट परिणाम निकाल्ने बाटो रोजेको हुँ । यस्तो गर्दा स्वार्थ समूहले आफू अनुकुल नभएपछि बदनाम गराउने अनेक माध्यम प्रयोग गर्छन् । विभिन्न तरिकाबाट खेद्ने काम हुन्छ । कतिपयलाई हो कि जस्तो पनि बनाइन्छ । तर, यस्ता कुराबाट डराउनु हुँदैन
ठूलो छ, ठूलो । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्न दिनुहुँदैन भनेर त ठूलो स्वार्थ समूह लागेको छ । तर, मलाई डर छैन । म एकदम प्रष्ट छु । निजगढ एयरपोर्ट बन्नैपर्छ भन्ने धेरै छन् । त्यसैले अब मलाई डर छैन । हिजोचाहिँ म एक्लै हुन्छु कि भन्ने थियो ।
केपी ओलीलाई अध्यक्ष बनाउनुपर्छ भनेर खुल्ला रुपमै बोलेर लागेँ । संसदीय दलको नेता बनाउनुपर्छ भनेर भोकल्ली बोलेको हुँ । नेतामाथि पनि न्याय हुनुपर्छ भनेको हो । त्यो वातावरण बनाएर क्याम्पेन गरेको पनि हो र अरु नेतालाई पनि ब्यालेन्समा लानुपर्छ भनेकै हो
नयाँ काम के सोच्नुभएको छ ?
सोच्नुपर्ने र गर्नुपर्ने धेरै छ । हामीले अब आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । बाहिरका लाई बोलाउँदैछौं तर नेपालीहरुमा घुम्ने बानी जुन बढेको छ यसलाई सरकारले सघाउनुपर्छ । आन्तरिक पर्यटन त यति बढेको छ कि, यसबीचका प्रचार प्रसारले सघाएको छ । अहिले त्यहाँ पूर्वाधार छैनन् । अहिले पर्यटक धेरै गए, अब अर्कोपटक पूर्वाधार बन्दै जान्छन् । हामीले आन्तरिक पर्यटन बढाउन भ्रमण बिदा दिनेखालका योजना ल्याउनुपर्छ ।
हिजो विकास समितिको सभापति हुँदा धेरै पूर्वाधार निर्माणमा सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो, काम भएनन् भनेर ताकेता पनि गर्नुभयो, आज आफैं त्यहाँ पुग्दा के फरक हुँदोरहेछ ?
हिजो पनि मैले कार्यकारीलाई सहयोग गरेको हो । त्यहाँ जोखिम हुन्थेन, यहाँ जोखिम हुन्छ । त्यहाँ निर्णय गर भन्दा पुग्थ्यो, यहाँ निर्णय गर्दा जवाफदेही हुनुपर्छ । तर, पनि मैले यो मन्त्रालयमा आएर राम्रा काम थालेको छु । हिजो थाति रहेका काम अघि बढेका छन् । रिस्क लिएरै काम हुने हो ।
म मेरो पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई भन्छु यो सरकारले प्रभावकारी काम गरिरहेको छ । भर्खर शुरुआत छ, अहिले सबै कुरा भन्ने बेला पनि भएको छैन । अहिले सबैले समर्थन गर्नुपर्छ सरकारलाई । अहिले सिंगो पार्टीले र मुलुकले नै प्रधानमन्त्रीलाई र यो सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । अहिले जति पनि काम अघि बढेका छन्, यी दीर्घकालीन रुपमा धेरै सकारात्मक छन् । यसलाई देख्न सक्नुपर्छ ।
तर, पार्टीको सिंगो पंक्ति सरकारका काममा सकारात्मक किन नभएको होला ?
यस्तो भयो, पार्टी संक्रमणको अवस्थामा छ । दुईटा पार्टी एक भएको तर कमिटी प्रणाली व्यवस्थित नभएको अवस्था छ । अर्को कुरा, हाम्रोभित्र संस्कार पनि त्यस्तै आइरहेको छ, जसले गर्यो उसैले डिफेन्स गर्नुपर्ने ।
तर, म के ठान्छु भने काम एकदम प्रभावकारी रुपमा गर्ने हो । आलोचनाबाट बच्नका निम्ति केही काम नगरी बस्नु ठीक हुँदैन । काम गर्दै जाने हो, स्वार्थ बाझिनेहरुले आलोचना गर्छन्, खेद्छन् यस्ता कुराबाट विचलित हुँदैनौं ।
पार्टीले पनि अब योजना ल्याउँछ । पार्टीले सबै एकीकरणका प्रक्रिया पूरा गरेपछि योजना ल्याउँछ । हामी कामबाटै विरोधीका आक्रमणलाई जवाफ दिन्छौँ ।
यो अन्तर्वार्ता अनलाईन खवरमा प्रकासित छ |
Sunday, November 11th, 2018 | Categories: Interviews, Media Coverage, Ministry Activity, News	| Tags: वाइडबडी खरिदमा मेरो गल्ती भेटिए राजनीतिबाटै सन्यास लिन्छुः पर्यटन मन्त्री	| Leaveacomment